Mandrahona ny hanaisotra ny Stonehenge amin'ny satan'ny Lova Iraisam-pirenena ny UNESCO
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba ny UK » Mandrahona ny hanaisotra ny Stonehenge amin'ny satan'ny Lova Iraisam-pirenena ny UNESCO
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Kolontsaina • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • tompon'andraikitra • Theme Parks • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao farany momba ny UK • Vaovao isan-karazany
Noho ny fanamboarana ny làlambe ambanin'ny tany, i Stonehenge dia hahazo ny toetoetran'ny zavatra iray izay tandindomin-doza, izay harahan'ny fanilihana avy amin'ny lisitry ny lova kolontsaina.
Mandrahona ny satan'i Stonehenge ny fanamboaran-dalana.
Tetikasa lalantsara ambanin'ny tany no nankatoavina tamin'ny Novambra tamin'ny taon-dasa.
Ny lalantsara dia mety ho efa ho 3 kilometatra ny halavany.
Stonehenge dia mety hahavery ny toerany amin'ny maha World Heritage Site azy noho ny fananganana tionelina ambanin'ny mari-pamantarana, raha ny tatitra voaray farany.
The Fikambanan'ny Firenena Mikambana momba ny fanabeazana, siantifika ary kolontsaina (UNESCO) dia nampitandrina ny manampahefana britanika fa noho ny fanamboarana ny lalambe ambanin'ny tany, Stonehenge dia hahazo ny toeran'ny zavatra atahorana. Ary izany dia harahan'ny fanilihana avy amin'ny lisitry ny lova ara-kolontsaina.
Ny tetikasa lalantsara ambanin'ny tany dia neken'ny Ministeran'ny Fitaterana anglisy tamin'ny Novambra tamin'ny taon-dasa. Natao hanamorana ny vesatry ny fifamoivoizana amin'ny làlambe A303 io. Ny lalantsara dia mety ho efa ho 3 kilometatra ny halavany.
Stonehenge dia tsangambato talohan'ny tantaran'ny Salisbury Plain any Wiltshire, Angletera, roa kilometatra andrefan'ny Amesbury. Izy io dia misy peratra ivelany misy vato mitsangana sarsen mitsangana, manodidina ny 13 metatra ny haavony, fito metatra ny sakany, ary milanja manodidina ny 25 taonina, apetaka amin'ny alàlan'ny vato lintel marindrano.
Ao anatiny dia misy peratra manga misy kely kokoa. Ao anatin'ireny dia misy trilithons mijoro maimaimpoana, Sarsens mitsivalana roa lehibe izay natambaran'ny lintel iray. Ilay tsangambato iray manontolo, izay efa simba ankehitriny, dia mitodika mankany amin'ny fiposahan'ny masoandro amin'ny lohataona fahavaratra. Ny vato dia apetraka ao anatin'ny asan'ny tany eo afovoan'ny sarotra indrindra amin'ny tsangambato Neolithic sy Bronze Age any Angletera, ao anatin'izany ny tumuli (toeram-pandevenana an-jatony).
Mino ny arkeology fa tamin'ny 3000 BC ka hatramin'ny 2000 talohan'i Kristy no nananganana azy. Ny banky sy ny hady boribory manodidina dia ny 3100 talohan'i Kristy talohan'izay. Ny fampiarahana amin'ny radiocarbon dia manondro fa ny bluestones voalohany dia natsangana teo anelanelan'ny 2400 sy 2200 talohan'i JK, na dia mety ho teo amin'ny 3000 BC aza izy ireo.
Iray amin'ireo mari-toerana malaza indrindra any Angletera, i Stonehenge dia raisina ho toy ny sary kolontsaina anglisy. Izy io dia tsangambato voaomana voalahatra ara-dalàna nanomboka tamin'ny taona 1882, raha ny lalàna hiarovana ny tsangambato manan-tantara no nampahafantarina voalohany teto Angletera. Ny tranokala sy ny manodidina azy dia nampidirina tao amin'ny lisitry ny UNESCO an'ny World Heritage Site tamin'ny 1986. Stonehenge dia an'ny Crown ary tantanan'ny English Heritage; ny tany manodidina dia an'ny National Trust.